Qubanaha » War sheegay in Xisbiga Daljir iyo Madaxweynaha is ku Fahmeen Halka uu ka imnaya Ra”isulwasaraha.
War sheegay in Xisbiga Daljir iyo Madaxweynaha is ku Fahmeen Halka uu ka imnaya Ra”isulwasaraha.
Xisbiga daljir oo ah xisbi si aad ah ugu ololeeyey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo , ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay madaxweynaha isla mel dhigeen qofkii noqon lahaa Ra”iisulwasaraha Soomaaliya qofkaasina u ka imaan doono dhinaca Xisbiga Daljir.
kulan ay albaada uxirannaayeen oo ay madaxweynaha la gaeen Gudoomiye kuxeenka 1aad ee aqalka Sare Abshir ,bukhaari,Xasan Maclin, Abdi Sabir Nuur Shuuriye,iyo Axmed Maclin fiqi oo ah Afarta shaqsi ee hogaamisa Xisbigaas ayaa waxaa lasheegay in Madaxweynaha uu ka aqbalay Codsigooda ku aadan in iyaga uu ka yimaada Ra”iisulwasaraha taasana la is ku raaccay.
Ilawareedyo siweyn ugu dhawaa kulamadaasi ayaa Qubanaha.net usheegay in kulanaka Madaxweynaha iyo Xubanaha Xisbiga Daljir uu ku soo dhamaaday Natiijo aad u wanaagsan,waxaana laga war sugayaa qofka ay soo Xulandoonaan Xisbigaasi.
Lama ogo in Afarta xubnood ee xisbigan madaxda ka ah midkood is ku soo sharixidoona jagadaan ,iyo in ay iyaga qof ku fakar ah keensandoonaan iyagoo shirarar xoogan ku shira .